Home Wararka Galmudug aqoonsi ugama baahna safiir dhinac u jaranjeera
Galmudug aqoonsi ugama baahna safiir dhinac u jaranjeera
Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan Aqalka Hoose ee xeer-dejinta Soomaaliya ayaa ka falceliyey hadalkii Mareykanka ee doorashada Galmudug.
Danjire Donald Yamamato oo “aqoonsaday” guusha lagu muransan yahay ee Axmed Kaariye [Qoor-qoor] ayaa dhinacyadda is-khilaafsan wuxuu ku booriyey wada-hadal.
Fiqi, oo kamid ah xubnaha mucaaradka Villa Soomaaliya, ayaa daboolka ka qaadey “in Yamamato lasii ogaa in uu dhinaca u janjeero”.
“Galmudug ma ahan state [maamul] ku dhex-yaalla Mareykanka oo aqoonsi uga baahan safiir horey loo sii ogaa mowqifkiisa dhinaca u janjeera,” ayuu kusoo qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga.
Hoos ka akhriso qoraalka Fiqi
Uma arko hambalyada safiirada ajnabiga ah sida Yamamato in ay Galmudug ilowsiin karto xanuunka kala qeybsanaanta, Galmudug ma ahan state ku dhex yaalla Mareykanka oo aqoonsi uga baahan safiir horey loo sii ogaa mowqifkiisa dhinaca u janjeera.
Waxaan dadka reer Galmduug xusuusinayaa inuusan u oolin dabaaldegid iyo hambalyo diris ayadoo ay Galmudug gudaheeda ay ku sugan yihiin 3 maamul oo hey’adahoodii barlamaanka wada wata.
Waxaan ka shaqsi ahaa qeyb ka noqon doonaa dadaalada nabadda iyo wadahadalka ee Galmudug lagu midaynayo si maamul dadkeedu raalli ka wada yihiin loo helo.